birdkhalay - MYSTERY ZILLION
မူလ › birdkhalay › မှတ်ချက်များ ဝင်ရောက်ရန် · အဖွဲ့ဝင်ခြင်း လှုပ်ရှားမှု
birdkhalay · အချက်အလက်
wailinmg;67435 said:MZ မှ ကိုကို မမ များခင်ဗျာ...
DSL မီးငြိမ်စေဖို့ရာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခင်ဗျာ။
Power ပေးလိုက်ပြီး ၅စက္ကန့်လောက်ဆိုရင် ငြိမ်ပါတယ်။ သို့သော်ငြားလဲ
တစ်နေ့လုံး ကျွန်တော်ဒုက္ခ က Computer ကို မကြည့်ရပဲ အဲဒီမီးကို ပဲ ကြည့်နေရပါတယ်။
in Dsl မီးလေးငြိမ်နေစေဖို့......
Comment by birdkhalay
blacksheep(it);1315 said:ဒီ Thread ကို ဘယ်မှာထားရမှန်းမသိလို့ ဒီမှာထားခဲ့တာပါ။ အဆင်ပြေသလို စီစဉ်ပေးပါ။
CD R/W နဲ့ပတ်သက်ပြီး နည်းနည်းမေးချင်ပါတယ်။ သုံးနေရင်းနဲ့ပဲ my computer မှာ CD R/W icon
မပေါ်တော့ဘူး။ device manager မှာလည်း CD ကို error ပြနေတယ်။ …
in Cd R/w
saimin;67241 said:ASUS P5KPL/16OO Motherboard Driver လေးလိုချင်လို့ပါ။
in ASUS P5KPL/16OO Motherboard Driver လေးလိုချင်လို့ပါ။
ကျွန်တော့် ကွန်ပြူတာမှာ မကြာခဏ သုံးရင်းနဲ့ bluse screen တတ်လာပါတယ်.. အဲလိုဖြစ်ရင် restart ချလိုက်ရပါတယ်.. ပြီးရင်တော့ ပြန်ကောင်းသွားပေမယ့် နောက်သုံးရင် ပြန်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်.. Window xp sp2 တင်ထားတာမကြာသေးပါ.. Memory ကို ခဲ…
in blue Screen
humantergets;66931 said:ညီလေး စက်မှာ စက်ကိုစဖွင့်လိုက်တာနဲ့ fan error ဆိုပြီးတော့f1 ကိုအမြဲတမ်းနှိပ်နေ၇တယ် ပြီးမှသာ window ကိုတက်ပါတယ်..။အဲ့လိုမနှိပ်၇အောင် ကူညီကြပါခင် ညာ..( fan အသစ်တော့မလဲပါ၇စေနဲ့နော်...:D.) ။ ကြာလာ၇င် စက်ကိုဘယ်လိုထိခိုက်နိုင် ပ…
in F1 ကိုအမြဲတမ်းနှိပ်နေ၇လို့ပါ...
47.Option;66784 said:ကျွန်တော် windows7မှာ folder တစ်ခုကို share ပေးထားတယ်။ တစ်ခြားစက်က share folder ကိုဖွင့် ရင် ကျွန်တော့်စက်ရဲ့ user name ,password ကိုတောင်းလို့ ရိုက်ပေးလိုက်ရင်တော့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်စက် restart ချပြီးပြန်တက်တာနဲ့ အဲဒီ…
in windows7network share folder Problem
မော်တာပါးစပ်;43004 said:Gmail အကောင့်သစ်ဖွင့်သည့်အခါ အရင်လို လွယ်လွယ်နှင့် Sign up လုပ်၍မရတော့ပါ... း(
အကောင့်သစ်ဖွင့်သည့်အခါတွင် နောက်ဆုံး I accept my creat account ကိုနှိပ်ပြီးသည်နှင့် နေထိုင်သည့်နိုင်ငံ၊ Mobile phone နံပါတ်ကို ရိုက်ခိုင်းပါသည်။ …
in Gmail အကောင့်သစ်ဖွင့်ရန် ခက်ပြီ...း(
Tar Tay;65750 said:thank you ပါ zawtk, restart လုပ်ပေမယ့် windows7မှာရော XP မှာရော မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်ကနေ download လုပ်ရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ၊ ဖြေပေးပါအုံး
:OှုInstall လုပ်ပြီးလို့ task bar က Gtalk icon လေးမှာ right click နှိပ်ပြီး Always idle မှာ…
in Gtalk Always Idle မရလို့
saturngod;64807 said:password ကို mail ပို့ထားပါသည်။ kophyo17 ရဲ့email နဲ့ယခုပေးထားသော mail မှာ မတူလို့ပါ။
:oဘရားသားရေ မရသေးဘူးဗျ ဒါပေမဲ့ ထားလိုက်ပါတော့ဗျာ ကျေးဇူးပါပဲ:106:
in log in ၀င်မရလို့ဗျ
blackmailer23;63846 said:နောက်ကျသွားတာ တောင်းပန်ပါတယ် ခင်ဗျာ
julykglay ၊ 7aing7aing ၊ ပန်းလေပြေ ၊ kolynn ၊ hanminsein ၊ tmmokpm ၊ hantunzaw ၊
mr.smitcellin ၊ chernobyl ၊ mgmgkyaw ၊ junelay ၊ thihazaw ၊ I^wait^my^love…
marijuana;64769 said:ကျွန်တော် deepfreeze passwordကို မေ့သွားလို့ဗျာ.. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ် ကလိတာလဲ စုံနေပြီ မရသေးဘူး. win လဲ ပြန်မဖြုတ်ချင်ဘူးဗျ.. ကူညီပေးပါဦး
in deepfreeze password မေ့သွားလို့